11-Sep-2012 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Austria from 4 to 6 June 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
25-Sep-2012 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Finland from from 11 to 13 June 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
9-Apr-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the former Yugoslav Republic of Macedonia from 26 to 29 November 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
16-Apr-2013 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Greece, from 28 January to 1 February 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
30-Sep-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Republic of Moldova from 4 to 7 March 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights